Android Wear 2.0 ကိုဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက်တွင်ဖြန့်ချိမည် Androidsis
Android Wear 2.0 ကိုဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက်တွင်ဖြန့်ချိမည်ဟုအီဗန်ဘလက်စ်ကပြောကြားခဲ့သည်
အများစုမှာ Android Wear 2.0 ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ ၎င်းသည် ၂၀၁၇ နှစ်၏ပထမသုံးလပတ်တွင်တစ်ပြိုင်နက်တည်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းထားသော်လည်း ၂၀၁၇ အစတွင်ရောက်ရှိမည်ဟုဆိုသည်။ ၎င်းသည်တူညီသော်လည်းပိုမိုခိုင်မာသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးကျနော်တို့သိခဲ့တာကအဲဒါရောက်လာလိမ့်မယ် ဖေဖော်ဝါရီလအစောပိုင်းတွင်။ အခုခြံစည်းရိုးကပိုပြီးတင်းကျပ်နေပြီးလာမယ့် Android Wear ကိုတရားဝင်ရောက်ရှိလာမယ့်နေ့ရက်အတိအကျရှိနိုင်ပုံရတယ်။
အီဗန်ဘလပ်စ်ကိုသူ၏လူမှုရေးကွန်ရက်တွစ်တာတွင်သူ၏ပရိုဖိုင်မှတစ်ဆင့်ထုတ်ဝေခဲ့သကဲ့သို့Android Wear 2.0 ကိုဖေဖော်ဝါရီလ ၉ ရက်တွင်လွှတ်မည်.
'အရည်အသွေးလိုအပ်ချက်များ' ကြောင့်ပြီးခဲ့သည့်ဆောင်း ဦး ရာသီမှနောက်ကျခဲ့သည် Android Wear 2.0 သည်အဓိကအားဖြင့် Android operating system အောက်ရှိ ၀ တ်ဆင်နိုင်သောကိရိယာများကိုစမတ်ဖုန်းများနှင့်မသက်ဆိုင်စေရန်အဓိကထားသည်။။ ထိုသို့ပြုလုပ်နိုင်ရန် Android Wear 2.0 သည်နာရီစတိုးကို Play Store နှင့်ပေါင်းစပ်ပြီး၎င်းသည်တိကျသောနာရီအက်ပလီကေးရှင်းများဒေါင်းလုပ်ချရန်နှင့်အက်ပလီကေးရှင်းဝယ်ယူမှုများကိုခွင့်ပြုသည်။
ပြီးခဲ့သည့်ဒီဇင်ဘာလက G ကြီး၏ကုမ္ပဏီက Android Wear 2.0 ၏စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များကိုအသုံးချမည့်တတိယပါတီအက်ပလီကေးရှင်းများကိုကြေငြာပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်သူတို့ကစနစ်များကိုလုံးလုံးလျားလျားပွတ်သပ်ချို့ယွင်းမှုများကိုရှောင်ရှားလိုကြသည်။ ထိုနည်းတူစွာ, ၄ င်းတို့စတင်သည့်အချိန်အတိအကျတွင် application အမြောက်အမြားရရှိရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
ဝတ်ဆင်နိုင်သောကိရိယာများအထူးသဖြင့်စမတ်နာရီများဈေးကွက်သည်သိသိသာသာကျဆင်းနေသော်လည်းဂူဂဲလ်သည်အပြည့်အဝတည်ငြိမ်သော Android Wear ဗားရှင်းကိုစတင်ရန်ကတိပြုခဲ့သည်။ ဤအကျပ်အတည်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာနာရီများနှင့်လက်ကောက်များကိုဖုန်းများပေါ်တွင်အလွန်အကျွံမှီခိုနေရခြင်းဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် Wear 2.0 သည်ကဏ္forအတွက်အားတက်စေနိုင်သည်.
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လွှတ်တင်မှုကိုဖေဖော်ဝါရီလ ၉ ရက်နေ့အတည်ပြုခြင်းရှိ၊ မရှိကိုစောင့်ကြည့်ရန်နှင့်စျေးကွက်၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဂရုပြုလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Android Wear 2.0 ကိုဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက်တွင်ဖြန့်ချိမည်ဟုအီဗန်ဘလက်စ်ကပြောကြားခဲ့သည်
ပိုကီမွန် GO သည်စံချိန်တင်ဝင်ငွေဒေါ်လာသန်း ၈၀၀ အထိရောက်ရှိခဲ့သည်
Android 7.0 Nougat update ကို Xperia Z5 နှင့် Z5 Premium သို့စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်သည်